Kidnapping tany Betroka: olona telo voasambotry ny zandary | NewsMada
Kidnapping tany Betroka: olona telo voasambotry ny zandary
Nanao ny fandihadiana avy hatrany ny zandary taorian’ny nahavotsotra ilay rangahy mpiasan’ny ala tany Isoanala Betroka ka fantatra fa telo ny olona voasambotra. Ny roa amin’ireo, mipetraka any Beakanga, kaominina Isoanala ihany, ary ny iray, ao Isoanala Tanàna. Mbola nahitana vola 2 100 000 Ar tany amin’izy ireo niaraka tamin’ny entana vaovao. Notanana ireo nanaovana avy hatrany fanadihadiana.
Raha tsiahivina, ny alin’ny alatsinainy no nisy naka an-keriny ilay rangahy mpiasan’ny ala efa misotro ronono. Tsy fantatra ny isan’ny olona naka an-keriny raha ny fanazavan’ny zandary. Ny ampitson’ny fakana an-keriny, nitaky vola 12 tapitrisa Ar ireo jiolahy ho takalon’ity rangahy ity. Rehefa voaloa ny vola, navotsotr’ireo olon-dratsy izy io.
Nilaza ny zandary tamin’ity raharaha ity fa tsy nahalala ny fakana an-keriny raha tsy efa votsotra ilay rangahy io. Nanokatra fanadihadiana izy ireo taorian’izay, ary izao niafara tamin’ny fahatrarana ireto olona telo ireto. Olona ao an-tanana ihany.